पोखरा महानगरको आफ्नै बहुप्राविधिक शिक्षालय – Sulsule
सुलसुले २०७७ भदौ १६ गते १६:४० मा प्रकाशित
कास्की, भदौ १६
पोखरा महानगरपालिकाले बजारको मागका आधारमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्यसहित ‘गण्डकी बहुप्राविधिक शिक्षालय’ स्थापना गरेको छ । सो शिक्षालयमा यसै वर्षबाट ‘डिप्लोमा इन अटोमोबाइल इन्जिनियरिङ’ र ‘डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ’को तीन वर्षे कोर्षको पठनपाठन सञ्चालन हुनेछ ।अटोमोबाइल इन्जिनियरिङसम्बन्धी आवश्यक सीपको अभावमा यहाँका युवा बेरोजगार बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा पोखरा महानगरपालिकाले यस क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको अध्यापन गर्ने भएको हो ।
प्राविधिक शिक्षा तथा तालीम परिषद्(सिटिइभिटी)बाट सम्बन्धन लिएर वडा नं. २९ भण्डारढीकमा स्थापना गरेको बहुप्राविधिक शिक्षालयबाट प्राविधिक विषयमा अध्यापन हुने महानगरले जनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा तीव्र विकास भएको क्षेत्रमध्ये अटोमोबाइल पनि एक हो । स्वदेशभित्रै गाडीका पार्टपूर्जा तथा उपकरणको उत्पादन नभए पनि छिमेकी मुलुकबाट आयात हुन्छ ।
गाडी तथा यसका पार्टपूर्जाको आयातसँगै यसको मर्मतसम्भारको काम गर्ने अधिकांश जनशक्तिसमेत विदेशी नै छन् । उच्च रोजगारी प्राप्तिको क्षेत्र भए पनि देशभित्र सो कामका दक्ष जनशक्ति नहुँदा ठूलो धनराशी बाहिरिएको छ । सिभिल इञ्जिीनियरिङ अधिकांश प्राविधिक शिक्षालयमा पढाइ हुने भए पनि अटोमोबाइल पढाइ हुने कलेज तथा क्याम्पस नगन्य छन् । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा केही वर्ष अघि अटोमोबाइल विषय अध्यापन गरिए पनि पनि हाल सोको पठनपाठन हुँदैन ।
सिटिइभिटीले विद्यार्थी भर्नाका लागि आवेदन खुलाउने र उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई शिक्षालयमा अध्यापन गरिने महानगर शिक्षा महाशाखा प्रमुख हेमप्रसाद आचार्यले बताए । उनका अनुसार दुवै विषयमा ४८/४८ सिट सङ्ख्या निर्धारण गरिएको र एसइई उत्तीर्ण विद्यार्थीले आवेदन गर्न सक्नेछन् । आगागी दशैँपछि कक्षा शुरु गर्ने तयारी गरिएको छ ।
राससका अनुसार महानगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले सबैभन्दा बढी रोजगारी प्राप्तिको क्षेत्रमा सधैं परर्निभर बन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अटोमोबाइल क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । आगामी दिनमा पर्यटन, वन, कृषिलगायत बजारको मागका आधारमा अन्य विषयका कक्षासमेत थप गर्दै योजनाअनुसार बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिएको उनले बताए ।
उनले भने, “सधैं परनिर्भर भएर पैसा बाहिर पठाएर यहाँका मान्छे बेरोजगार बस्नुको अर्थ छैन, अटोमोबाइलवालालाई समेत आफूलाई चाहिने जनशक्ति लगानी गरेर पढाउ भन्ने हो, रोजगारको सुनिश्चिता गरेपछि मान्छे पढ्न आउलान् भन्ने छ ।” यस वर्ष पहिलोपटक दई विषयमा प्राविधिक विषय अध्यापन गरिए पनि शिक्षालयको पूर्वाधार निर्माणपछि प्राविधिक धारका कक्षासमेत थप गर्र्दै शिक्षालयलाई प्राविधिक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्ने योजनाका साथ महानगरपालिका अघि बढेको प्रमुख जिसीको भनाइ छ ।
विद्यार्थी कोटा निर्धारण, छात्रवृत्ति तथा भर्ना शुल्क तय गरिसकिएको महाशाखा प्रमुख आचार्यले बताए । खुलामा देशभरिका विद्यार्थीले न्यून शुल्कमा पढ्न पाउँछन् भने महानगरवासीलाई केही कोटा निर्धारण गरिएको र सोहीअनुसार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिसमेत प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइएको छ ।
सिभिल इन्जिनियरिङका लागि तीन वर्षको रु. एक लाख ९५ हजार शुल्क छ भने अटोमोबाइलको रु. एक लाख ७५ हजार तोकिएको छ । आफ्नै पूर्वाधार नबन्दासम्म शुरुआतमा महानगरले जनप्रकाश माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । प्राक्टिकलको लागि पश्चिमाञ्चल क्याम्पससँग सम्झौता गरिएको शिक्षा महाशाखा प्रमुख आचार्यले जानकारी दिए । “पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म हामीले जनप्रकाश मा.वि.मा पढनपाठन गर्दछौँ, राम्रो ल्याब भएकाले प्राक्टिकल पश्चिमाञ्चल क्याम्पसमा हुन्छ”, उनले भने ।
अटोमेकानिकल बक्र्स एशोसिएशनका अध्यक्ष सानुमान जलारीले अटोमोबाइलको जनशक्ति जिल्लामा अभाव रहेको बताए । यस विषयको अध्यापनबाट दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन हुने र मागको पूर्ति हुने उनको भनाइ छ । यहाँ अटोमोबाइलको क्षेत्रमा काम गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत हाराहारीमा भारतीय कामदार रहेको उनको भनाइ छ ।